अधिकारकर्मी नै हिंसामा - Pradesh Today
Homeफिचरअधिकारकर्मी नै हिंसामा
तुलसीपुर, १३ मंसीर । विन्दु शर्मा बिगत पाँच वर्षदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै आइरहेकी छन् । महिला अधिकारका लागि काम गर्दै गर्दा उनी पनि हिंसामा पर्ने गरेकी छन् । पीडितले उजुरी दिएकै आधारमा पीडक पक्ष शक्तिशाली बन्न खोज्दा आफूहरू पनि जोखिममा पर्ने गरेको उनको भोगाइ छ ।
संस्थामा कोही कसैले उजुरी लिएर आएको छ भने पीडकले आफ्नो पहुँच देखाउन खोज्छ, उनले भनिन्– ‘कतिपय व्यक्तिहरू त आफु नदेखिएर संस्थालाई धम्की दिने, डर क्रास देखाउने र दुव्र्यवहार गर्ने गरेका छन् ।’
जबरजस्ती करणीका मुद्दाहरू हेर्ने समयमा राजनैतिक दलका ठूला नेताहरू स्वयम् फोन गरेर आफ्नो कामलाई बाधा पु¥याउने गरेको उनले बताइन् । ‘कतिपयले फोन गरेर हाम्रै कारणले यहाँसम्म आएका छौँ’ उनले भनिन्– ‘अलि विचार गर भन्दै आडम्वरी स्वभाव देखाउने गर्छन् ।’ कतिपय महिला हिंसामा परेमा उजुरीहरूमा पीडकले पीडित पक्षलाई रकमको प्रलोभनमा पारी मुद्दालाई उल्ट्याउन पठाई अपराधी चिन्दैनौ भन्न लगाई आफ्नो पहँुच देखाउन खोज्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
यस्तै लामो समयदेखि महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल दाङमा कार्यरत शुष्मा गिरीले नयाँ महिला अधिकारकर्मीहरूमाथि सुरक्षा चुनौती धेरै रहेको बताईन् । समाज अझैपनि परम्परागत मूल्य मान्यता र पितृसतात्मक सोचमा अल्झिरहेको भन्दै उनले काम गर्दै गर्दा घरपरिवार, गाउँ समाजबाट विभिन्न अवरोधहरू सिर्जना हुने गरेको बताउँछिन् ।
महिलाहरूको अधिकारका लागि विभिन्न संघसंस्था, प्रहरी प्रशासन, सरकारी कार्यालयलगायतका विभिन्न ठाउँमा जाँदै गर्दा विभिन्न संघ संस्था, राजनैतिक दल, पीडक पक्षका पहुँचवाला व्यक्तिहरूले किन यो काम गरेको ? कसका लागि गरेको ? यो काम गरे के मिल्छ ?
भन्ने जस्ता प्रश्न गरी मानसिक यातना दिने, काममा अवरोध ल्याउन खोज्नेलगायतका व्यवहारसमेत देखाउने गरेको उनले बताइन् । ‘हामी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि विभिन्न ठाउँमा पुग्दै गर्दा विशेषगरी राजनैतिक दलहरूले हामीहरूलाई रोक्न खोज्छन्’
उनले भनिन्– अरूको अधिकारका लागि काम गर्दै गर्दा आफ्नो अधिकार र सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ, यो हामी पुरानालाई भन्दा बढी यस क्षेत्रमा काम गर्ने नयाँ दिदीबहिनीहरूलाई बढी छ ।’
त्यसैगरी महिलाहरूको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी ओरेक नेपाल दाङ जिल्ला संयोजक ईश्वरी थापाले पीडितहरूका मुद्दा हेरेकै आधारमा विभिन्न प्रकारका धम्कीहरू आउने गरेको बताइन् ।
विशेषगरी महिला हिंसामा परेका महिलाहरूलाई घरपरिवार र समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने समयमा निकै चुनौती हुने गरेको उनको अनुभव छ । आफ्नो बेइजत हुन्छ भन्दै उजुरी परेका मुद्दाहरूलाई उल्ट्याउन खोज्ने, ढाकछोप गर्न खोज्ने, चित्त नबुझे महिला अधिकारकर्मीहरूलाई समेत मानसिक यातना दिने गरेको उनको भनाइ छ ।
महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील महिला अधिकारकर्मीहरू आफू स्वयम् हिंसामा पर्ने गरेका छन् । महिलाहरूको हक, अधिकारका लागि काम गर्दै गर्दा विभिन्न पक्षबाट डर, त्रास र धम्कीसमेत आउने गरेको उनीहरूको अनुभव छ ।
पीडित व्यक्तिहरूको पक्षमा रहेर काम गरिरहेकै अवस्थामा पीडक पक्षहरूले आफ्नो शक्ति र पहँुचको आधारमा अधिकारकर्मीहरू स्वयम्लाई धम्क्याउने, डरत्रास देखाउने जस्ता व्यवहारहरू देखाउने गरेको पाइएको छ । सरकार पक्षबाटै सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहुँदा अधिकारका क्षेत्रमा रहेर काम गर्नु शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक जोखिमता धेरै रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
महिला अधिकारकर्मीहरूको अवस्थाबारे छलफल
यसैबीच घोराहीमा महिला अधिकारकर्मीहरूको अवस्थाका बारेमा छलफल गरिएको छ । महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल दाङ र महिला पुनस्र्थापना केन्द्र दाङको सहकार्यमा महिला हिंसाका विरूद्धमा रहेर काम गर्दै गर्दा भए गरेका चुनौती र अवस्थाका बारेमा छलफल गरिएको हो ।
उक्त छलफलमा महिला अधिकारकर्मीहरूले काम गर्ने समयमा हुने समस्यालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । अरूको अधिकारका लागि काम गर्दै गर्दा आफ्नो अधिकार र संरक्षणका विषयहरूसमेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै उनीहरूले स्थानीय सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । आफूले काम गर्दै गर्दा आईपरेका घटनाहरूलाई अभिलेख राख्दै एकजुट भएर आफूहरूमाथि हुने विभिन्न व्यवहारको अन्त्यका लागि एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए ।
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल दाङकी अध्यक्ष हुमा डिसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न संस्थामा आवद्ध ३४ जना महिला अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण ओरेक नेपाल दाङकी सचिव पद्मा चौधरीले गरेकी थिइन् ।